बच्चालाई कति वर्षसम्म स्तनपान गराउनु राम्रो ? - Naya Pusta
Nayapusta - Leading new generation news portal.
बच्चालाई कति वर्षसम्म स्तनपान गराउनु राम्रो ?
✍️ नयाँ पुस्ता	 ६ मंसिर २०७७, शनिबार २०:४६
काठमाडौँ । एक महिला जब आमा बन्छिन्, उनले संसारको सम्पूर्ण खुशी पाएको अनुभव गर्छिन्। आफ्नो बच्चालाई जब उनले छातिमा टाँसेर स्तनपान गराउँछिन्, त्यो क्षण उनको जीवनको अति नै महत्वपूर्ण क्षण बन्छ।
त्यो केवल स्तनपान मात्र होइन, त्यसले आमा र बच्चाबीचको प्रेम र ममतालाई प्रगाढ पार्ने काम गर्छ। महिलाले बच्चालाई स्तनपान गराउँदा ममतामयी आनन्दको अनुभव गर्छिन्। तर आमाहरुलाई बच्चालाई कति समयसम्म स्तनपान गराउने भन्नेबारे थाहा नहुन सक्छ ।
बच्चालाई स्तनपान गराउन कतिको आवश्यक छ, कति र किन गराउने भन्नेबारे पूर्ण जानकारी लिएपछि मात्र बच्चालाई कहिलेसम्म स्तनपान गराउने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ।
बच्चाको शुरुआती दिनले नै उनीहरुको भविष्यका दिनहरु बनाउँछ। भविष्यका रोगहरुबाट बचाउँछ, उनीहरुको इम्यून सिस्टमलाई विकसित गर्छ। त्यसैले बाल्यवस्थामा उनीहरुको खानपानलाई विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । विशेष गरेर स्तनपानको बारेमा ध्यान दिनु अति नै आवश्यक छ।
तपाईंको इम्युनिटी पावर कमजोर त छैन ? यसरी आफै जाच्नुहोस्
स्तनपान नगराउनु अथवा छिट्टो स्तनपान गर्नबाट रोक्नुले बच्चा र आमा दुवैमा नराम्रो असर पर्न सक्छ। बच्चा जन्मनासाथ स्तनबाट निस्कने दूध एन्टीबायोटिकले भरिपूर्ण हुन्छ, जुन नवजात शिशुको विकास र रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउनका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ।
यसले शिशुको काम, साससम्बन्धी, झाडापखाला र अन्य प्रकारका इन्फेक्सनहरुबाट बचाउँछ। आमाको दूधमा आवश्यक फ्याटी एसिड हुन्छ, जसले बच्चाको मानसिक क्षमताको विकास गर्छ। स्तनपान गर्ने बच्चाहरुमा मोटोपनको समस्या हुँदैन ।
विश्व संगठनको अनुसार बच्चालाई पहिलो ६ महिनासम्म स्तनपान मात्र गराउनु पर्छ। ६ महिनापछि स्तनपानसंग अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थ खान दिनु पर्छ। विश्व संगठनका अनुसार बच्चालाई दुई वर्षसम्म स्तनपान गराउनु उपयुक्त हुन्छ।
त्यसैले जुन आमाले आफ्ना बच्चालाई ६ महिनापछि पनि स्तनपान गराउन चाहन्छिन्, उनले निश्चित भएर स्तनपान गराउन सक्छिन्। स्तनपान गराउनाले आमा र बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो र फाइदाजनक हुन्छ।
सम्बन्धित पाेष्टहरु लेखकबाट थप
हातमा आउने यी परिवर्तन हुनसक्छन् खतरनाक रोगको लक्षण
गर्भवती महिलालाई हुन्छ यस्तो रोगको खतरा, नियन्त्रण गर्न नसके बच्चालाई हानी
घरको यो कुनामा हुन्छ सबैभन्दा ठूलो शक्ति, भूलेर पनि नगर्नुहोस् यस्तो गल्ती
तीन घण्टापछि काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल रिहा
जापानले आफ्नो देशमा बस्ने सबैलाई कोरोनाको खोप निःशुल्क लगाइदिने
यस्ता रोगीले झुक्किएर पनि खानुहुँदैन कागती, पानी पिउनु झन् खतरनाक !
यी चार राशिका पुरुषहरूले पाउँछन् ‘सुन्दर’ र ‘३२ लक्षणले भरीपूर्ण गुणवती’ श्रीमती
शनिबारको दिन भुलेर पनि नखानुहोस् यी ७ चिज, नत्र शनिको दशा लाग्नेछ !
खुट्टा र गलामा लगाउनुहोस् यस्तो रंगको धाँगो, कुनै पनि दोष नलाग्ने धार्मीक विश्वास
माछापुच्छ्रे मिडिया नेटवर्क प्रा. लि. द्वारा सञ्चालित नयाँ पुस्ता डटकम (www.NayaPusta.com) नयाँ पुस्ता अनलाइन डटकम (www.NayaPustaOnline.com)
संचालक/प्रधान सम्पादक : अमृत पौडेल
केन्द्रीय कार्यालय : पोखरा महानगरपालिका-२६ पोखरा, कास्की
फोन : +977-1-4363848, 9851000431